“Qurbajoogta Somaliland ee UK oo fariin u soo diray codbixiyayaasha, si midaysana u taageeray musharixiinta KULMIYE” |
Kulan aad u balaadhan oo ay soo qaban qabanqaabiyeen qurbajoogta Somaliland ee dalka UK ayaa xalay (28.10.2017) lagu qabtay magaaladda London. Kulankan oo ay ka soo qaybgaleen aqoonyahano, waxgarad iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshadda ayaa waxay fariin dhawr qodob ah u soo direen bulshadda Somaliland. Sidaas oo kale waxaa kulanka lagu sii sagootiyey wafti culus oo u safar ugu soo baxaya Somaliland si ay uga qayb qaataan sidii uu xisbiga KULMIYE ugu guulaysan lahaa doorashadda madaxtooyadda Somaliland ee dhawaan dhici doonta.
Doorashaddan waxaa ku tartamaya saddex musharax oo reer Somaliland ah oo midkood uu codkaaga ku noqon doono madaxweynaha Somaliland.
Mudane muwaadin waxay masuuliyaddi kaa saaran tahay inaad doorato hogaamiye leh hiigsi iyo hiraal, kuna haboon marxallada Somaliland ay maanta marayso
Mudane muwaadin, waxaa haboon inaad tixgeliso wakhtiga ay Somaliland ku jirto iyo duruufaha inagu xeeran ee amni, dhaqaale iyo siyaasadeed-ba si aad u kala dooratid saddexda musharax ee u tartamaya hogaanka dalka.
Somaliland waxay guulaysanaysaa marka muwaadiniinteedu u codeeyaan si muwaadinimo leh , musharixiintana lagu kala doorto barnaamijyadda xisbiyadda qaranka iyo qorshahooda, iyo doodii musharixiinta madaxweynaha ee la qabtay 19-ka October 2017 taas oo waxbadan iftiimisay.
Dhanka kale, waxaanu aaminsanahay inay muhiim tahay in la tixgeliyo kartidda iyo taariikhda saddexda musharax ee la xidhiidha halgankii , nabadayntii iyo dib u dhiskii dalka ee aan lagu kala dooran qabiilka iyo goboladda ay ka soo jeedaan.
Markii aanu tixgelinay qodobadda kor ku xusan, una kuur galnay xoggogaalnimadda musharixiinta ee xaaladda dalka, duruufaha jira iyo sidda looga bixi karo-ba.